Tari-dalana Toriteny Alahady 12 Febroary 2017 (Alahady faha-9 mialoha ny PASKA) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Faly miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo. Indro atolotra anareo eto indray ny tari-dalana momba ny perikopa izay ho toriana manerana ny sahan’ny FLM amin’ny Alahady faha 12 Febroary ho avy izao. Mirary soa indrindra tompoko.
Alahady faha-9 mialoha ny Paska isika izao, ry havana. Izany hoe, efa mibanjina tsikelikely indray izany andro lehibe izay nanatanterahan’Andriamanitra asa lehibe ho antsika teo ambony hazofijaliana izany. Ny fanontanian’ny lehilahy iray (19:16–25; cf. mpanankarena iray araka an’i Lioka 18:18ff., Nikodemosy [?] araka an’i Jaona 3:1ff.), momba izay hataony mba hahazoany ny fiainana mandrakizay sy ny valintenin’i Jesosy fa tsy hain’olombelona izany fa asan’Andriamanitra irery ihany, no texte izay eo alohan’ity anjarantsika ity. Raha mibanjina ny texte isika, ny fanontanian’i Petera hoe “Indro izahay efa NAHAFOY NY ZAVATRA REHETRA ka nanaraka Anao….” ao amin’ny and. 27 sy ny valin-tenin’i Jesosy ao amin’ny and. 29 manao hoe “izay rehetra efa NAHAFOY TRANO, NA RAHALAHY…” dia mira zotra. Izany hoe, raha dinihina tsotra dia ny and. 29 no valin’ny fanontanian’ny mpianatra izay nosoloin’i Petera tena ao amin’ny and. 27. Natsofoky Matio ao anelanelan’izany anefa ny amin’izay hiseho rehefa mby amin’ny fanavaozana (Izy), dia ny hipetrahan’ny Zanak’Olona (Jesosy) eo amin’ny seza fiandrianany (any an-danitra) sy ny hipetrahan’ny mpianatra eo amin’ny seza fiandrianana 12 ka hitsarany ny foko Israely 12.
I. NY FIAINANA MANDRAKIZAY: LOVA HO AN’NY MPANARAKA AN’I JESOSY (and. 27 sy 29)
Ny mpanaraka an’i Jesosy dia izay efa mahafoy ny zavatra rehetra dia ny trano, rahalahy, anabavy, ray, reny, zanaka, tany. Ny mari-potoan’ny matoanteny fototra nadika hoe NAHAFOY (ἀφῆκεν, aorist active of the verb ἀφίημι, to leave) eto dia manambara amintsika fa nahafoy tanteraka izany izy. Fa inona no hevitry ny hoe “Nahafoy ny zavatra rehetra?”. Mety ho heviny ny hoe “tia an’i Jesosy/Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra”, fa izay tena hevitra ao ambadik’ izany koa dia izao: tsy misara-mianakavy ary nofehezin’ny kolotsaina sy ny fomba amam-panao izay namatotra azy tamin’izany ny fianakaviana Jiosy. Zava-tsarobidy tamin’ny Jiosy ny LOVA kanefa tsy afaka nandova ny haren-drainy ny zanaka lahy ohatra raha tsy efa maty izy. Mitovitovy amin’ny fomba sy kolotsaina any afovoan-tany eto Mada: tsy misara-mianakavy ny fianakaviana, afatotry ny fasana iraisana sy ny fomba amam-panao iraisana ao, toy ny famadihana ohatra, ka izay tsy manao izany dia sady tsy mandova no ho voaroaka ankolaka tsy ho isan’izany fianakaviana izany.
Ny fandaozana tanteraka izany fomba amam-panao sy kolotsaina jentilisa izay mamatotra ao amin’ny fiarahamonina izany àry no tian’i Jesosy hambara koa amin’ny teniny hoe “nahafoy trano sns.” eto. Izany hoe, ny mpanaraka marina an’i Jesosy dia tsy maintsy mandao izany fomba amam-panao sy kolotsaina izay mamatotra azy ao amin’ny fiarahamonina misy azy. Manaraka izany, ny mpanaraka an’i Jesosy, na dia tsy hahazo lova avy amin-drainy eto an-tany noho ny fandaozany izany fomba sy kolotsaina jentilisa izay mamatotra azy izany aza, dia manana lova maharitra mandrakizay avy amin-dRainy izay any an-danitra.
II. NY MPIANATRY JESOSY DIA HITSARA NY FIANGONANA (and. 28)
Inona no tian’i Jesosy ambara amin’ity and. 28 ity? Inona no tiany ambara amin’ny hoe “rehefa mby amin’ny fanavaozana na fiteraham-baovao? Inona no tiany ambara amin’ny hoe “hipetraka amin’ny seza 12 ka hitsara ny firenena Israely 12? Efa an-dalana ho any Jerosalema farany hanatanteraka ny asany tampony eo amin’ny hazofijaliana Jesosy izao. Araka ny fahafantarantsika azy dia taorian’ny fitsanganany tamin’ny maty Izy no niakatra ka nipetraka teo an-kavanan’ny Ray. Araka izany, ny hoe “fanavaozana na fiteraham-baovao” eto dia tsy hafa fa ny “fitsanganany tamin’ny maty”: fanavaozany izay rehetra nampiraisina taminy koa izany. Ao amin’ny Matio 28:18–20 (jereo koa Marka 16:9–19), rehefa niakatra any an-danitra taorian’ny fitsanganany tamin’ny maty Jesosy dia nanome andraikitra ny mpianany hitory ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra Izy. Azo antsoina hoe “asa fitsarana” koa an’izao tontolo izao na ny Fiangonana Kristiana izany satria “ny marina amin’ny finoana (izany Filazantsara izany) no ho velona” (Rom 1:16–17), izay tsy mino kosa dia ho faty mandrakizay.
Mandra-pahatongan’ny fotoana izay hanomezan’Andriamanitra ny mpianatry Jesosy tanteraka ny lova mandrakizay any an-danitra, dia izany asa fanompoana Azy amin’ny fitoriana ny Filazantsara izany no ho valisoa izay omeny azy ireo eto an-tany: lasa mpiara-miasa amin’Andriamanitra izy ireo. Ny mpitory ny Filazantsara anefa dia velomin’izany Filazantsara izany koa. Ny valisoa homen’i Jesosy/Andriamanitra ny mpanaraka Azy hatreto an-tany ka hatrany an-danitra àry no ambaran’ny texte izay anjaratsika. Lova sarobidy izany ka izay manao izany ho tena lova tokoa no handray izany feno avy amin’Andriamanitra.
Ho an’ilay Andriamanitry ny LOVA mandrakizay anie ny Voninahitra. Amena!